Ardayda Jaamacadda Muqdisho oo ay ubilaabatay daraasada sanad waxbarashadeedka 2017-2018 |
Ardayda Jaamacadda Muqdisho oo ay ubilaabatay daraasada sanad waxbarashadeedka 2017-2018
Ardayda Jaamacadda Muqdisho ayaa saakay iyagoo wajiyadooda laga dheehanayay farxad aad u balaaran ay u bilaabatay daraasadii sanad waxbarashadeedka 2017-2018 ee Jaamacadda Muqdisho.
Ardayad lagu magacaabo Najmo Ibraahim Cali oo kamid ah ardayda Jaamacadda Muqdisho dhigatana kuliyada Health Science oo cabiraysay dareenkeeda iyadoo aad u faraxsan ayaa u mahad celisay maamulka iyo macalimiinta Jaamacadda Muqdisho bilaabashada daraasada iyo xarunta wayn ee loosoo guuray oo ay ku tilmaamtay meel ku haboon waxbarashada iyo caafimaad ahaan.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Macalin Maxamed Cusmaan oo isna kamid ah ardayda Jaamacadda Muqdisho ayaa isna kutilmaamay bilaabashada daraasada mid ay aad ugu faraxsanyihiin, xarunta waynna ay tahay mid kuhaboon ayna ku diyaarsanyihiin dhamaan agabkii uu ubaahnaa ardayga sida maktabadii, masjidkii, biyihii, dhirtii quruxda badnay kuna waagsaneed xiliyada ay ardadu nasanayaan, wuxuuna ardada kula dardaaramay inay guntiga dhiisha isaga dhigaan ayna muujiyaan karti iyo dulqaad dheeri ah.
wuxuuna u mahad celiyay masuuliyiinta jaamacadda dadaalka ay ummada Soomaaliyeed u hayaan wuxuuna u rajeeyay guul iyo horumar.
ugu dambayntii madaxa xafiiska arimaha ardada Jaamacadda Muqdisho ustaad Muuse Axmed Cabdullahi ayaa uhambalyeeyay ardayda bilaabashada daraasada wuxuuna u rajeeyay dadaal iyo horumar dheeri ah, wuxuuna ardayda usheegay inay udiyaar garoobaan tartamadii iyo hawlihii xafiiska u gaarka ahaa.